माधव नेपाल र मातृका यादवलाई कारवाही गर्न पार्टीभित्रबाटै माग, अब के गर्लान ओली प्रचण्ड ? – ताजा समाचार
माधव नेपाल र मातृका यादवलाई कारवाही गर्न पार्टीभित्रबाटै माग, अब के गर्लान ओली प्रचण्ड ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवमाथि कारवाहीका लागि प्रदेश २ को कमिटीले सिफारिस गरेको छ । कमिटीले बर्दिबास घटनामा पार्टीका नेताद्धय नेपाल र यादवको संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । दुवैमाथि थप छानविन गरेर कारवाही गर्न सिफारिस गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस्तै, सहसंयोजकद्वय नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न र केन्द्रीय सदस्यहरु गोपाल ठाकुर, जगत यादवमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ । रामचन्द्र झा, श्रीप्रसाद साह, शत्रुघन महतोहरुलाई नसियत दिन सिफारिस गरिएको छ ।
२४ भदौमा सिरहा र सप्तरीको जिल्ला कमिटीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा हुलदंगा गर्दै तोडफोड गरिएको थियो । यो लगायतका घटनाबारे प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज, सहइन्चार्ज तथा अध्यक्ष र सचिवले मंगलबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहाना प्रधान कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रणी नेता रहेको बताएका छन् । पाँचौँ सहाना स्मृति दिवसमा सहाना प्रधान प्रतिष्ठानले सोमबार गरेको कार्यक्रममा उनले प्रधानको योगदानका धेरै पक्ष रहेको टिप्पणी गरे ।
‘समग्रमा उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनको अग्रणी नेता हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँ समाजको रूपान्तरण र राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानजस्तो राजनीतिज्ञ, राणाशाही र तानाशाहीविरुद्ध जीवनभर अप्ठ्याराको सामना गरेको बिर्सन नहुने बताए । उनले पुष्पलालले नेपाली समाज र माक्र्सवादको राम्रो विश्लेषण गरेर पार्टी स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै नेपालमा क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रियालाई सुरु गरिएको उल्लेख गरे । उनले पुष्पलाल र प्रधानलगायतले त्याग, तपस्या, निष्ठा, मिहिनेतको जीवन व्यतित गरे पनि व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा, फाइदाका निम्ति क्रान्तिलाई प्रयोग नगरेको जिकिर गरे ।
‘नाम त अहिले कम्युनिस्ट नै छ, के साँच्चै कम्युनिस्ट नै छौँ त अहिले ? भन्न त हामीले समाजवादको यात्रा सुरु गर्ने भनेका छौँ, के हामीले समाजवादको यात्राका निम्ति योद्धा जस्तै छौँ त ? या, बिस्तारै कांग्रेसजस्ता र हिजोका निरंकुशतावादीजस्तै पद र प्रतिष्ठाका निम्ति लागेको छौँ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । तानाशाहले पनि विकासको मूल फुटाउने कुरा गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले के गर्छौं भन्ने कुराको अर्थ छ, हामीले के भन्छाैं भन्ने त्यति अर्थ छैन ।’ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, पम्फा भुसालले राजनीतिक र महिला आन्दोलनमा सहाना अद्वितीय नेता रहेको विचार व्यक्त गरे ।